Nasaina nigafy ny mpomba ny TGV dia tsy voafehy intsony!
2009-01-25 @ 22:59 in Politika
Manamarika dieny mialoha aho fa ady amin'izao fotoana izao izany mampita vaovao izany. Samy manana ny paik'adiny ny andaniny sy ny ankilany ka tsy fantatra intsony izay marina sy tsy marina. Niniako navela mihitsy ny lahatsoratra nialoha ity hahitanao ny hafainganan'ny fivoaran-javatra amin'izao fotoana izao. Raha nanova lohateny aho dia loharano azo natokisana no nahazoako azy. Efa fivorian'ny mpikambana ao amin'ny governemanta no hanaovana izany fa tsy tonga dia tanterahina avy hatrany ny fanatanterahana azy fa miandry "ilay feo" tsy avy amin-dRavalomanana fa avy amin'olon-kafa sy olo-maro. Efa tao anatin'ny tanjona ihany koa ny hitabataban'ny mpanohana ny filoha ny hisamborana ny Ben'ny tanànan'Antananarivo; araka ny fanaon'ny mpanohana ny TGV ihany koa hamaliana azy araka ny fijeriko azy satria ry zareo ihany manko no nitatatata teny amin'ny 13 mey fa "ny feon'ny vahoaka feon'Andriamanitra"(ka mitaky ny hisamborana azy ny vahoaka amin'izao fotoana izao! quelle logique mais c'est ainsi!).
Nanao ahoana ary ny fandehan'ny fitsenana ny filoha Ravalomanana androany alahady 25 janoary 2009? Raha ny hamaroan'ny olona dia vasoka tanteraka ny an'ny TGV omaly sabotsy, hany ka tsy mahagaga raha nanomana gafy ry zareo. Na dia ny hamaroan'ny fiara mitandahatra manaraka ny arabe efa notononina mialoha handalovan'ny filoha aza dia efa nahaletra ny sasany efa fanatika loatra ka tsy mahatandrina izay ataony intsony. Nandeha ny fiarabe nitondra fanamafisam-peo nivezivezy nanerana ny lalana mandefa hira fankalazana ny TGV sy mihorakoraka TGV, ninia nandalo ireo olona miandry ny fandalovan'ny filoha ireo manana fiara avy amin'ny TGV ka mandrangarana ilay "heil..." efa mihamalaza amin'izao fotoana izao. Mba nisy ihany ireo tapikan'olona nihorakoraka ny maha-TGV azy ireo fa tsy nokitihin'ny mpomba ny filoha rehefa tsy nanakana ny lalan'ny filoha. Mandrangitra mandrakariva ny mpomba ny TGV fa nitony hatrany ny mpomba ny filoha. Teto 67 ha dia ankizy eo ho eo amin'ny 10 - 12 taona eo ary miisa 60 any ho any no nampanaovina akanjo TGV nampihorakorahana TGV teo anoloan'ireo mpomba an-dravalomanana mbola miandry ny fandalovany. Mba fantatr'izay ireo ve ny zavatra ataony? Nefa rahampitso dia ampianarina ny atao ny ataohoe "demaokrasia" hoe ny mpianatra rahampitso aorian'ny fanaovana kidnapping lehibe.
Nivadika kosa ny toe-draharaha teo Ambohimanarina, maro dia maro manko ny mpitsena tao kanefa teo ihany koa ary tsy vitsy ny mpanohana ny TGV. Nobahanan'izy ireo fanariam-pako lehibe ny arabe tokony handalovan'ny filoha eny amin'ity faritra ity. Mazava loatra fa tsy maintsy nakisaky ny hafa izany barazy izany. Rehefa nandalo ary ny mpanara-dia ny filoha dia nisy vitsivitsy tamin'ireo mpihorakoraka TGV no nitora-bato ny fiaran'ny fiadidiana ny Repoblika. Nentanin'ny fo loatra ve sa voakarama? ny ampitso no hanambara azy. Nahita izany ireo hafa mpihoraka tsy maintsy nandositra ihany koa... saingy ny hafanam-po mialoha ka nahazoana ny sarin'izy ireo no itsimponana azy ireo tsirairay any amin'ny misy azy any amin'izao fotoana anoratana izao (miasa tokoa ny sampam-pitsikilovana amin'izao fotoana izao).
Teto amin'ny 67ha, rehefa niala tamin'ny toerana nisy azy amoron'arabe ny mpanohana ny filoha, dia nanangana ny "andrimasom-pokonolona" baiko avy amin'ny VIVA radio kosa ny mpanohana ny TGV, amin'ny fibahanana ny fiara rehetra tsy hahazo miezivezy mbola andro mazava. Horakorahan'izy ireo (25 eo ho eo ny isany) sy rahonany hotoraham-bato izay fiara mbola mitady hikiry handeha amin'ny arabe manaraka ny lalam-baovao hany ka miverin-dalana tsy fidiny avokoa ny fiara rehetra. Marihina fa fanentanana ataon'ny VIVA radio izany rehetra izany. Na ny fiaran'olona mipetraka eto 67ha aza dia tadiaviny tsy avela mody... indrisy! ny vitsy an'isa sa ny maro an'isa no manao izany? (ny antson'ny mpihaino ihany no nahalalana fa efa nitora-bato mihitsy ry zalahy ireo ka maro no vaky fitaratra ny fiarany teto 67ha) izaho mipetraka eto 67ha aza efa nojerijeren-dry zalahy akaiky saiky hotomoriny saingy hitany tsy nisalasala angaha dia tsy sahy nokitihina, na dia nantsoitsoina aza.
Mandeha dia mandeha moa ny fanentanana amin'izao fotoana izao (26 jan @ 00: 30 ora Antananarivo) fa efa mananika an'Ambohimitsimbina sy Ambodivona ny miaramila ka manentana ny rehetra hirodorodo. Misy ireo mpiantso no tezitra fa toa tsy miraika akory ny olona antsoina... Entanina koa amin'izao ora anoratako izao ny olona (mpiantso no manentana) mba hosamborin'ny "fokonolona" avokoa ny mpitondra fanjakana (minisitra, praiminisitra, filoha,...) rehetra mipetraka eny akaikiny eny satria mba mahay misambotra koa ny vahoaka raha mitady hisambotra an'i TGV ry zareo. Misy ihany anefa no lasa mihoa-pefy ireo "andrimasom-pokonolona" ka mitora-bato avy hatrany izay fiara "ahiahiana", teny amin'iny faritra Ambatonakanaga iny no nisy izany... Nanala tena avy hatrany ny tao amin'ny VIVA fa tsy tokony ho ny TGV velively no manao izany fa fanasoketana ihany izany. Mbola velona ihany koa anefa ny fanentanana ataon'"olom-pirenena" ao amin'ny VIVA Radio hanafihana ny tobin'ny MBS izao alina izao (00:48 ora Antananarivo).
Malahelo avokoa na dia ireo mpanohana ny TGV aza amin'izao fihoaram-pefy tafahoatra izao. Manala tena ny TGV satria mpihorakoaraka hoe TGV migafy sy mitoratoraka ireto olona ireto. Miezaka ny hiampanga ny TIM na ny mpitondra izy ireo saingy ny hita teny Ambohimanarina moa no manao ahoana satria ny tao amin'ny VIVA ihany no niteniteny fa "misy amin'izao fotoana izao ny fisamborana ny ankizintsika niantsoantso TGV no samborina amin'izao fotoana izao". Hay tena nirahin'ny tao amin'ny VIVA na ny TGV mihitsy ireo olona teny Ambohimanarina niantsoantso TGV ka nisy nitora-bato avy eo ireny!
Hamarana ihany aho fa mbola hiasa maraina ka andeha aloha hatory... Mahasahia izay mpihaino VIVA mandà ireo teny tao amin'ny VIVA radio ka voatsimpona teto ampanoratana ireo (mbola mandeha manko ny antso fanentanana amin'izao 00:56 ora Antananarivo izao. Ho voasamboatra ao anatin'ny ora vitsivitsy ve i Andry sa tsia? Na ho tsia aza ny valiny, mety ho sahirana ihany izy handeha eny amin'ny kianjan'i 13 mey rehefa mazava ny andro!
jentilisa, 26 janoary 2009